Maleeshiyada Shabaab oo qasaare ka soo garay dagaal ka dhacay Gedo – Radio Muqdisho
Maleeshiyada Shabaab oo qasaare ka soo garay dagaal ka dhacay Gedo
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegayaa in dagaal u dhexeeya Ciidanka Xoogga Dalka iyo Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Naflacaariga ah ee Alshabaab,gelinkii dambe ee xalay.
Dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaadkaasi Shabaab ay arbushaad ah ay ku soo qaadeen magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo,gaar ahaan ag agaarka Buundada,halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidmado ka tirsan Xoogga Dalka,sida uu soo dheegayo wariyaha warbaahinat Qaranka ee Gobolka Gedo Cumar Ceyduruus Axmed.
Saraakiisha Militariga Soomaaliya ayaa sheegay in qasaare dhimasho iyo dhaawac ay dagaalkaasi ugu geesteen maleeshiyaadkii soo weerary,islamarkaana hub iyo dad nool laga qabsaday.
Abaanduule Qorax ayaa sheegay in ay ku raadjoogaan firxadka maleeshiyaadkaasi Shabaab,waxaana uu intaasi ku daray in ay sii wadidoonaan dagaalkaasi.
Gobolada Gedo iyo Jubboyinka ayaa muddooyinkan dambe waxaa ka soconayay howlgalo ballaaran oo ka dhan ah Maleeshiyad Alshabaab,si looga hortago dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada.
Tartamayaasha Degmada Xamar Jajab oo caawa u soo gudbay wareegga 3aad ee tartanka “SAWIRRO”